OLAC Record: Fonds Denise Bernot, birman, 1964, bande 026, face Aa
Title: Fonds Denise Bernot, birman, 1964, bande 026, face Aa
Abstract: Un homme explique en birman, répétant chaque phrase deux fois, comment préparer la soupe de poisson appelée «mohinga», et comment se rendre au marché de Hmawbi (nord Yangon). L’enregistrement devient ensuite sourd et difficilement audible. Ensuite, l’homme parle à nouveau du marché de Hmawbi et de la manière de s’y rendre, de la nourriture, des prix, puis il parle des offrandes aux esprits Nats, et finit par une description de différents types de cuisine birmane.
A man explains in Burmese, repeating each sentence two times, how to prepare the fish soup called ''mohinga'', and how to get to Hmawbi market (North of Yangon). The recording sound is then muffled and is barely audible. Next, the man talks again about Hmawbi market, and how to get there, the food, the prices. Then, he speaks about the offering to the Nats spirits. He finally describes different sorts of Burmese cooking.
အမျိုးသားတဦးသည် ဝါကျတကြောင်းစီကို မြန်မာဘာသာဖြင့် နှစ်ကြိမ်စီရှင်းပြပြောဆို၍ မုန့်ဟင်းခါးဟုခေါ်သော ငါးဟင်းရည်ကိုမည်သို့ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ရကြောင်းနှင့် မှော်ဘီစျေးသို့(ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်း)မည်သို့ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းတို့ကို ရှင်းပြပြောဆိုသည်။ အသံသွင်းချက်သည် နောက်ပိုင်းတွင်တိုးသွားပြီး မကြားနိုင်လောက် အောင်ဖြစ်သွားသည်။ ထို့နောက်သူသည် မှော်ဘီစျေးအကြောင်း ထပ်မံ၍ပြောဆိုသည်။ စျေးသို့မည်သို့သွားနိုင်ပုံ အစားအစာများ၏စျေးနှုန်းများအကြောင်းပြောဆိုသည်။ ထို့နောက် သူသည်နတ်အားပူဇော်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောဆိုသည်။ နောက် ဆုံး၌ မြန်မာဟင်းချက်နည်းအမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြပြောဆိုသည်။
Alternative Title: Fonds Denise Bernot, Burmese, 1964, tape 026, side Aa
Description: Un homme (U Nan Waii inscription support bande) raconte comment préparer le mohinga (les ingrédients, le prix, les techniques culinaires) avant de l'offrir en donation. Il raconte ensuite comment se rendre au marché de Hmawbi (à 10mn). Les phrases sont répétées deux fois. La prise est sourde et il yades bruits de micro, la piste est peu audible. Il décrit ensuite les instruments de l'orchestre (? inscription support bande, car la piste est quasi inaudible) (13mn à 27mn). Ensuite, il reparle du marché de Hmawbi, de la manière de s'y rendre, des denrées, des prix (de 27mn à 34mn). Il parle ensuite des offrandes aux esprits tutélaires Nats (? inscription support bande, car la bande est quasi inaudible) (34 mn à 41mn). L'homme décrit ensuite diverses préparations culinaires birmanes (de 41mn à 48mn).
A Burmese speaker (U Nan Wai according to the information on the recording tape) explains how to prepare the fish soup called ''mohinga'' (the ingredients, their price, the cooking techniques) before offering the soup asadonation. He then explains how to get to Hmawbi market (North of Yangon) and repeats sentences two times. The recording sound is muffled and there are microphones noises, so it is barely audible. (at 10mn) The man then describes the different instruments ofaBurmese orchestra (according to the recording tape information, as it is impossible to know for sure because the recording is not audible) (13mn to 27mn). Then, the man talks again about Hmawbi market, and how to get there, the food, the prices (from 27mn to 34mn). Next, he speaks about the offering to the Nats spirits (according to the recording tape information, as it is impossible to know for sure because the recording is not audible) (34 mn to 41mn). He then describes different sorts of Burmese cooking (from 41mn to 48mn).
မြန်မာစကားပြောသူတဦး (အသံသွင်းခွေမှရသော သတင်းအချက်အလက်အရ ဦးနန်းဝေဟုသိရသည်) မုန့်ဟင်းခါးဟုခေါ်သော ငါးဟင်းရည်ကိုမည်သို့ချက်ပြုတ်ရကြောင်း (ပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ စျေးနှုန်းများ၊ ချက်ပြုတ် နည်းစနစ်များ) အလှူအဖြစ် မကျွေးမွေးမီ ရှင်းပြပြောဆိုသည်။ ထို့နောက်သူသည် မှော်ဘီစျေး (ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်း)သို့ မည်သို့သွားရကြောင်းရှင်းပြပြီး၊ ဝါကျတိုင်းကို နှစ်ကြိမ်စီရွတ်ဆိုပြသည်။ အသံသွင်းချက်တိုးသွားပြီး မိုက်ခရိုဖုန်းဆူညံသံများဖြင့် အသံကိုမကြားနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားသည်။ ( ၁၀ မိနစ်တွင်) ထို့နောက် သူသည် မြန်မာဆိုင်းဝိုင်းမှ ကွဲပြားခြားနားသော တူရိယာများအကြောင်း ဖော်ပြပြောဆိုသည်။ (အသံသွင်းခွေမှရသော သတင်းအချက်အလက်အရ သိရသည်။ အသံသွင်းထားသည်များကို မကြားရ၍ တိကျသေချာစွာမသိရှိနိုင်ပါ။) ( ၁၃ မိနစ်မှ ၂၇ မိနစ်ထိ) ထို့နောက် သူသည် မှော်ဘီစျေးအကြောင်း၊ မည်သို့သွားနိုင်ပုံ အစားအစာများ၊ စျေးနှုန်းများအကြောင်း ထပ်မံပြောပြန်သည်။ ( ၂၇ မိနစ်မှ ၃၄ မိနစ်ထိ) (တဖန်ထပ်မံ၍) နတ်များကိုပူဇော်ပသခြင်းအကြောင်းပြောသည်။ (အသံသွင်းခွေမှရသော သတင်းအချက်အလက်အရ သိရသည်။ အသံသွင်းထားသည်များကို မကြားရ၍ တိကျသေချာစွာမသိရှိနိုင်ပါ။) (၃၄ မိနစ်မှ ၄၁ မိနစ်ထိ) ထိုနောက် သူသည် မြန်မာဟင်းချက်နည်းအမျိုးမျိုးကို ဖော်ပြပြောဆိုသည်။ (၄၁ မိနစ်မှ ၄၈ မိနစ်ထိ)
Identifier: Ancienne cote: crdo-BER_1964_BUR_026_Aa
Identifier (URI): https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-4d52b77e-b649-3ab9-ad05-f018e9140cdf
Is Format Of (URI): https://cocoon.huma-num.fr/data/bernot/private_bernot/masters/BER-1964-BUR-026-Aa.wav